Nhau -Nhungamiro Yakareruka yeKuredza kubva muBoat
Kana iwe uchida kuzorodza iwe chikepe nechigaro chitsva, don'usazeza kushanyira webhusaiti yedu, kune Avariety yematayera ekuti iwe usarudze,https://www.xgearsports.com/boat-seat/
Kubata hove mumahombekombe erwizi kana pachiteshi chengarava kunopa mafaro ako pachako, asi hapana chakafanana nokupinda mumvura yakadzika kuti ubate hove.
Nechikepe chako wega, unogona kutsvaga nzvimbo yekuredza yakakwana uye, uchichengetedza chinzvimbo chako, iwe nevamwe vako munogona kuzorora uye kumirira hombe kuruma.
Heano mamwe matipi aunogona kutevera kuti ubudirire paunenge uchiredza kubva muchikepe chako:
Sezvakaita chero basa rekunze, kubata zvikepe kunoda kugadzirira.Rangarira kuti kamwe iwe'waraswa, ungasazodzokera kumahombekombe kwenguva;saka, unofanira kuva nechokwadi chokuti une zvose zvaunoda.Kugadzira chinyorwa chekuongorora pachine nguva, uye kunyora pasi zvese zvidiki senge tsikidzi repellant uye chirauro-ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekuva nechokwadi chekuti waita'ndinokanganwa chero chinhu.
Zvinoenda pasina kutaura kuti mudziyo wako unofanirwa kunge uri muchimiro chepamusoro usati wabuda.Iwe hauna'handidi kuve nedambudziko remuchina uri kunze mugungwa, nyanza, kana rwizi.
Zvakare, iwe unofanirwa kuve uine anchor ine saizi yakakodzera.Pane zviitiko apo anchor yakakura iri nani, senge kana uchibata hove mumvura yakadzika, sezvo inogona kubata chikepe chako zviri nani.Iwe unodawo kuva neketani yakakwana-hurefu hudiki, sekutonga kwechigunwe, hunofanirwa kunge hwakareba sechikepe chako, asi hunogona kureba.
It'zvakanakisa kuita tsvakiridzo yako kuti uone kuti ndeipi anchor ingakodzera chikepe chako uye zvaunoda.Sezvo mhando dzakasiyana dzinenge dzine hukuru hwakasiyana, iyo'zvakanakisa kuyambuka-tarisa maviri kana anopfuura kugadzira saizi machati.Izvi zvinowanzowanikwa muzvitoro zvemugungwa.
Kubata hove kwakanyatsochengetedzwa kunogona kududzira mutsauko uripo pakati pechiitiko chekuredza-saka uye icho chaunogona kudada nacho.
Asi midziyo haifanirwe kuongororwa chete nekuti iwe'ndichaishandisa-unofanira kupa giya rako kuongorora nguva dzose.
Izvi zvinoreva kutsiva reels'mitsetse mikuru, kunyanya iyo inopera nyore nyore semitsetse yemonofilament;uye kushandura mutungamiri wehove kana iwe uchinzwa nicks paunofambisa ruoko rwako pairi.
Kuenda kunoraura muchikepe chako zvinotora zvinopfuura kungoisa anchor pane imwe nzvimbo uye kukanda mutsara wako.Kunyangwe iwe uchigona kuita izvi, izvo'haisiriyo nzira inoshanda nekuti unogona kunge uri kutambisa nguva yako.
Kuti uite zvakanyanya kubva parwendo rwako rwekubata hove, unofanirwa kuita kumwe kuronga kwepamusoro.Chekutanga, tsvaga rudzi rwehove dzauri kuda kubata uye ona kana dzakadaro'shingaira mumwaka.
Sezvineiwo, unogona kutarisa kana hove iyo inonyanya kushanda-kufanana nemamiriro ekunze akanakisa, mafambiro emhepo, uye masaisai anoenderana navo-uye kuronga rwendo rwako panguva iyoyo.Iwe unofanirwawo kuona kwaunoda kuredza, uye kuti ndeipi tsvimbo nechirauro zvingave zvakanyanya kufanira nzvimbo iyoyo.
5, Ndisati Matanga
Chokwadi, ndizvo'zvinonakidza kuti pakupedzisira uende kunoraura muchikepe chako, asi izvo'zvakakosha kuti upe nguva yakakwana usati waronga kuti uite zvimwe zvinhu zvishoma.
6, Pfeka Zvipfeko Zvakakodzera
Iyo giya yaunosarudza inofanira kunge yakakodzera kune nzvimbo yaunenge uchibata hove.Semuyenzaniso, murwizi kana mugomba usina kudzika maungangopinda mukati, majombo akasimba angave sarudzo yakanaka yeshangu.Mamiriro ekunze zvakare chinhu chekufunga nezvacho pakusarudza zvipfeko zvako, zvine mamwe matinji anodiwa munzvimbo dzinotonhora.
Zvakare, nzendo dzekuredza dzinogona kutora zuva rose kana kunyange kureba, zvichienderana nehurongwa hwako, saka rongedza mabhegi ako zvinoenderana.Yeuka kuti kunyange zvazvo mamiriro okunze achidziya masikati, tembiricha inogona kuderera sezvo husiku hunoswedera.
Uye mune chero kukwira igwa, kunyangwe munzendo pfupi, ita shuwa kuti iwe nevamwe vako mune bhachi rehupenyu mumwe nemumwe.
7, Tarisa Mamiriro Ekunze
Iwe unofanirwa kuyeuka kuti kunyange zvakadaro's zuva rakajeka zuva risati rasvika rwendo rwako, izvi zvinogona kuchinja pazuva raunosarudza'tangazve kuenda kunoraura.Mamiriro ekunze anogona kushanduka zvakanyanya, saka ita chokwadi chekutarisa zvigadziriso usati waenda nechikepe.
Saka ndeipi mamiriro akanakira kubata hove?Zuva rezuva rinogona kunakidza vanhu, asi dzimwe hove dzinowanzoenda kumvura inotonhorera yakadzika pasi kuti isapisa.
Zvakadaro, mwero wakafanira wechiedza chezuva, kunyanya munzvimbo dzisina kudzika, unogona kuita kuti mamwe marudzi ashande.Kufukidzira kunoonekwa sechinhu chakanakira kurembera, sezvo hove dzichidya mamiriro okunze akaipa asati auya.
Nekudaro, mitumbi yemvura inogona kuve nenjodzi mudutu, saka kana mumwe achiuya, ungada kusarudza kumbomira kana kudzima rwendo rwako.Kunze kwezvo, hove hadzimbobati chirauro mumamiriro okunze akaoma.
Mhepo inochinja mafungu, zvichiita kuti zvivaomere kugara munzvimbo yacho, uye havanyanyi kuona kana kuona chirauro chako.
Zvinogona kuoma, asi kana hombe ikaruma, uchanzwa mubairo wekushingirira kwako.